Daalụ maka ndụmọdụ ndị a. Ọ bụụrụ m iwe inwe ya na stats m.
Disemba 1, 2015 na 5:27 mgbede
Ị nzọ. Anyị emelitere ngwọta ziri ezi maka nke a ebe ọ bụ na ndị spammers na-ezo aka anaghị abịa na saịtị gị n'ezie.
Enyemaka spam na-ezo aka (@RefSpamHelp)
Anyị nwekwara iwe na spam na-ezo aka. Anyị nwara ụfọdụ "ihe ngwọta" achọtara na webụ - btw htaccess-manipulaton anaghị egbochi ndị na-ezo aka mmụọ -, jiri aka na-emepụta ihe nzacha oge ụfọdụ na GA ma mesịa wuo ngwọta akpaaka anyị: http://www.referrer-spam.help ...
Anyị nwere olileanya na ọ ga-amasị gị.
Disemba 1, 2015 na 5:28 mgbede
Ma ọ dị ka ndị na-ezo aka mmụọ aghọwo ndị na-eme egwuregwu na-achị. Anyị emelitela ndụmọdụ dị na saịtị ahụ. Daalụ maka enyemaka niile ị na-enye!
Disemba 1, 2015 na 5:29 mgbede
Ị nzọ. Anyị emelitela ndụmọdụ a nke ọma dabere na ụzọ ntụaka mmụọ ọhụrụ ndị a jerks na-eji.
Nnukwu enyemaka ebe a, daalụ! Ugbu a were ndidi chere maka mgbanwe ọnụego bounce 😀
Disemba 1, 2015 na 5:50 mgbede
Emelitere m ndụmọdụ iji nye akụkụ maka nchịkọta Google. N'ụzọ dị otú ahụ ị pụrụ ịhụ mmetụta ozugbo.
Ọgọstụ 5, 2015 na 4:21 ehihie
Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya n'elu / mgbada spam okwu: Ndị spammers na-agbasa ya wee nye ọgwụgwọ - nke ahụ bụ echiche m.
Ị enyochala ihe mgbochi IP ma ọ bụ ihe ọ bụla iji hụ ma ọ dị nso ịchọta ha?
Echiche ndị ọzọ m na-agbalị ịhụ ma ndị ọzọ anwalela:
1) M ga-asị na tọgharịa kuki ahụ ka ọ nwee ogologo oge ọnụ ọgụgụ dị ka nleta mana bots ga-anọgide na-akụ saịtị ahụ. Ihe ndị a kwesịrị ka a na-emeso ya dị ka ọgụ DDoS n'ihi ụzọ ha si ewepụ ihe onwunwe anụ ahụ
2) Mepụta profaịlụ ọhụrụ wee tinye koodu ọhụrụ na Google Tag Manager ka koodu ahụ ghara ịdị mfe skim. Ọzọkwa, ịme akaụntụ ọhụrụ na ịme ihe dị ka profaịlụ 4 ka ọnụ ọgụgụ ikpeazụ agaghị akwụsị na -1 bụ echiche ọzọ. Mana, m na-eche n'oge a, ndị spammers na-emepụta nọmba UA na-akpaghị aka ma ọ bụ na-eleghara ọnụọgụ UA niile ọnụ & na-eji ngwa mgbasa ozi url.
Ndewo, ezigbo onye ndu, arụgoro m ngwá ọrụ efu nke na-enweta nyocha wee wuo faịlụ htaccess maka saịtị gị, ọ bụ n'efu. http://refererspamtool.boyddigital.co.uk/ nye ya aka
Ọgọstụ 14, 2015 na 10:20 ehihie
Disemba 8, 2015 na 4:50 mgbede
Ezigbo ihe, Douglas.
Disemba 8, 2015 na 5:50 mgbede
Daalụ Don! Enwere m olileanya na ihe niile dị mma.
Ọ bara uru…. Ụdị okporo ụzọ spam a bụ ihe mbụ kpatara akụkọ ọjọọ na nyocha, nke na-adịghị enyere aka igosi ndị ahịa ka saịtị ahụ si arụ ọrụ.
Jenụwarị 1, 2016, elekere 12:55 nke abalị
daalụ m website juputara na spam na adsense machibido m
Jenụwarị 3, 2016, elekere 6:10 nke abalị
Spam na-aghọ nnukwu okwu n'oge a. Agbanyeghị, ọkwa a abụghị maka saịtị gị ma ọ bụ ndị mmadụ na-akpachapụ saịtị gị n'ezie. Ha na-emepe Google Analytics. O kwesịghị imetụta Adsense gị ma ọlị, mana ọ ga-emebi Google Analytics gị.
Ihe spam a juru m anya. Enwere m olileanya na ọ ga-enyere m aka.
Adịkwa m. Enweghị m ike ikwenye na Google ewepụtabeghị ihe ngwọta maka nke a.
Nnukwu ibe, nwere ụfọdụ nsogbu na nke a n'oge gara aga na ọtụtụ ndị yiri ka ha amaghị na ọ na-aga ọbụna na-aga!
Daalụ na ekwenyere m… Amaghị m ihe na-eme ogologo oge, ma!
Daalụ maka edemede gị Douglas. Ọgụgụ dị ukwuu. Akpọrọ m spam asị kpamkpam, ọ kpatala ọtụtụ nsogbu maka weebụsaịtị m n'oge gara aga, mgbe ụfọdụ na-eme ka saịtị wordpress m daa mgbe m nwere ụdị wordpress ochie.
N'ezie na-aga ịkọrọ akụkọ a na saịtị m.
Ana m amalite ugbu a blọọgụ wordpress maka ndị ahịa.
Ndewo Douglas .. enwere m otu ajụjụ. Ana m enweta nleta ole na ole site na com.google.android.googlequicksearchbox / .com
Ndewo Fauzy, ekwere m na nke ahụ bụ onye nrụtụ aka ziri ezi sitere na ya Ngwa mkpanaka Google Android.
Kedu ihe kpatara ntụgharị mmụọ na-eme, gịnị ka ndị spammers a na-esi na ya pụta?
Ọ bụ n'ezie ihe na-akụda mmụọ. Naanị uru ọ bara bụ na ndị ọrụ nyocha na-enweghị ọkaibe ga-achọ onye na-ezo aka ma nwee ike zụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha. Ọ bụ ụzọ jọgburu onwe ya na ihe ọchị nke ịnwa ịghọgbu ndị nwe saịtị na-amachaghị nke ọma.